Webinar – Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar: Presenting Solutions from the Ground - Progressive Voice Myanmar
Home Resources Press Releases Webinar – Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar: Presenting S...
Press Release 1199 Views
September 28th, 2021 • Author: Human Rights Foundation of Monland , Kachin Women’s Association Thailand , Karen Human Rights Group , Karen Peace Support Network , Karen Women’s Organization , Karenni Civil Society Network , Karenni National Women’s Organization , Pa-O Women’s Union , Progressive Voice and Ta’ang Women’s Organization •3minute read
Nearly eight months after the attempted coup in Myanmar, the junta has severely compounded the existing humanitarian crises in Myanmar, continued to weaponize humanitarian aid to its advantage by withholding, restricting, or even destroying the delivery of aid and have instrumentalized assistance to further its own false narrative as protector of the people. Thus,ashift by the international community and donors towards community-based ethnic organizations and locally distributed cross-border aid is essential to ensuring aid reaches those most in need. Civil society and community-based ethnic organizations who are providing aid to the displaced communities on the ground are facing difficulties in accessing funds due to strict donor regulations. More than ever before, there isaneed fora‘do no harm’ solidarity-based approach in the provision of humanitarian aid in Myanmar and for donors to be flexible, fast track applications and remove bureaucratic barriers to accessing funds during this humanitarian emergency.
Amid the increasing and dire need for the provision of humanitarian aid, and the increasing role of the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) in the Myanmar crisis, civil society representatives will offer key insights on how humanitarian aid can be effectively distributed within ethnic and non-ethnic regions through local actors. The webinar will also discuss the briefing paper “Nowhere to Run: Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar” produced by Progressive Voice and nine ethnic community-based and locally-based civil society organizations, which provides an overview of the devastating humanitarian crisis in Myanmar, focusing on Kachin, Karen, Shan, Karenni, Chin, and Rakhine States. The recommendations given in the paper predominantly focuses on ethnic regions but can be applied beyond these regions as many of the issues and themes discussed therein apply nationwide, including central and southern Myanmar.
Time: 9.30 – 11.00 AM (Yangon Time)
Translation: Burmese to English simultaneous translation is provided for this event on Zoom platform.
Dr. Cythia Maung, Mae Tao Clinic
Maw Pray Myar, Karenni National Women’s Organization
Mai Khin Khin, Human Rights Activist, Chin State
Moderator – Thinzar Shunlei Yi, Action Committee for Democracy Development
The briefing paper is co-authored by:
၂၈ ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းချိန်မှစ၍ ရှစ်လနီးပါး ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်ရှိထားသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများမှာ ပို၍ပင် ဆိုးရွားလာနေသည်။ စစ်အုပ်စုသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းများဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လက်နက်သဖွယ် ဆက်လက်အသုံးချနေသည့် အပြင် ၎င်းသည် ပြည်သူများကို ကာကွယ်ပေးနေသည်ဆိုသော မှားယွင်းသည့် ဝါဒဖြန့် ရေးသားဖော်ပြမှုများ ကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အလှူရှင်များအနေဖြင့် အကူအညီ လိုအပ်နေသော ပြည်သူလူထုထံသို့ အကူအညီ အထောက်အပံ့များ ရောက်ရှိနိုင်ရေး လူထုအခြေပြု တိုင်းရင်းသား အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲပံ့ပိုးရန်နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေဒေသများတွင် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသော ပြည်သူများကို အကူအညီ ပေးနေကြသော အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း များသည် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၏ တင်းကြပ်လှသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြောင့် ကူညီထောက်ပံ့ငွေများ လက်လှမ်းမီရရှိရန်မှာ အခက်အခဲများစွာနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ ယခုချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ပံ့ပိုးပေးရာတွင် “မည်သူမျှ ထိခိုက်နစ်နာခြင်း မရှိစေရေး” ဟူသည့် သွေးစည်းညီညွတ်မှု အခြေခံသော ချဉ်းကပ်မှုမျိုး လိုအပ်နေပြီး အလှူရှင်များအနေဖြင့် အရေးပေါ် အခြေအနေအတွင်း ရံပုံငွေများ လက်လှမ်းမှီနိုင်ရေး ဖြေလျှော့မှုများ လုပ်ဆောင်ရန်၊ လျှောက်လွှာများကို လျင်မြန်စွာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဗျူရိုကရေစီ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားပေးရန် အလိုအပ်ဆုံး အချိန် ဖြစ်သည်။
သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီအတွက် အာဆီယံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စင်တာ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management – AHA Centre) ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ လိုအပ်ချက်များ မြင့်မားလာနေသည့်အချိန်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို နယ်မြေခံ အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် လိုအပ်နေသူများထံ မည်သို့ထိရောက်စွာ ပေးပို့ဖြန့်ဝေနိုင်သော နည်းလမ်းများကို အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့နှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း ၉ ဖွဲ့တို့မှ ပူးတွဲထုတ်ဝေသော “ပြေးစရာ မြေမရှိ – ပို၍နက်ရှိုင်းလာနေသော မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူသားချင်းစာနာ‌ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း” ခေါင်းစဥ်ရှိ စာတမ်းတိုပါ အကြောင်းများကိုလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားပါမည်။ အဆိုပါစာတမ်းတိုတွင် စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှု ၈ လတာ ကာလအတွင်း တိုင်းရင်သားဒေသများဖြစ်သည့် ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်နီ၊ ချင်း နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း ပိုမိုဆိုးရွားလာနေသည့် အခြေအနေကို အလေးပေးဖော်ပြထားပါသည်။ ယခုစာတမ်းတို၏ အဆုံးတွင် ပေးထားသော အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များသည် တိုင်းရင်းသားဒေသများ အတွက် အဓိက ရည်ရွယ် ထားသော်လည်း စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးဒဏ်များမှာ နယ်မြေအကန့်အသတ် မရှိဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရသည့် အနေအေထားတွင် ထိုအကြံပြုချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း တို့အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ၏ အခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ပါသည်။
နေ့စွဲ – ၄ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
အချိန် – နံနက် ၉း၃၀ နာရီ မှ ၁၁း၀၀ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန်)
စာရင်းသွင်းရန် – https://zoom.us/webinar/register/WN_TIB5H0J_To6gCkRb_1gxBg
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၊ မယ်တော်ဆေးခန်း
Moderator – မသဥ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်၊ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် – info@progressive-voice.org